Fisavana fiara :: Sarona ny vola sandoka roapolo tapitrisa ariary • AoRaha
Fisavana fiara Sarona ny vola sandoka roapolo tapitrisa ariary
Nosakanana sy nosavain’ny zandary ny fiara tsy mataho-dalana iray marika «Ford Ranger » nandalo tany Vavatenina, afak’omaly tolakandro. Nahitana vola be tao anatin’ny fiara. Vola sandoka ny roapolo tapitrisa ariary. Vola tena izy kosa ny valopolo tapitrisa ariary. Nosamborina sy notanana avy hatrany ireo mpandeha tao anatin’io fiara io. Nogiazana ihany koa ny vola rehetra.
Naheno vaovao mialoha ny Zandarimaria, tany Fenoarivo Atsinanana, fa misy olona mitondra vola sandoka efajato tapitrisa ariary ho any Vavatenina. Niroso tamin’ny fanamarinana ny vaovao ny mpitandro filaminana. Natao ny sakana sy ny fitsirihana.
Olona dimy no voasambotra tamin’io raharaha vola sandoka io, araka ny tatitra avy amin’ny mpanao famotorana. Mitohy ny fisavana ny tranon’izy ireo hikarohana ny ambin’ireo vola sandoka marobe. Mitohy ihany koa ny fanadihadiana.